Gantuu garaa qofaa Dhagayi Siif himee… - Welcome to bilisummaa
bilisummaa February 8, 2015	Leave a comment
Gariin mataan du’ee
Seenaa tokko hinqabuu
Rabbi nurraa darbee
Garii hin agarree
Bakka isiin buutee.
Lubbuun ima jirti
Ufii jiruu Duutee
Daaraa bubbeen fuutee.
Gariin ammas jirtii
Warri ija burree.
Kan ba’aa hindadhabne
Akka sanyii harree.
Warri yoo ilaalan
Warra nama nyaatu
Bulguu ija buudaa.
Maaltu isii dhibee
Akkaa saree maraattee
Asiif achi kaattii.
Murtii diinaa baattee
Akkuma warra durii
Rabbi isii haa salphisuu.
Waan hojjatte keessaa
Qullaa isii haakaasuu.
Dhiigni qaama isii
Isii haa argatuu.
Sammuu isii qabee
Nurraa haa darbatu.
Gochaa jaraa santuu
Garaa kiyya gubee
Waan jettaniin jedhaa
An asitti dhaabee.
Hanga walaloo biraatii walgarrutti
Tags Abbaa Duulaa alamaayyoo atoomsaa Juneeydii Saaddoo Muktaar Kadir
Previous Walgayiin jilli OPDO Meelboornetti taa’uuf karoorfame fashale jedhu
Next TVOMT: Boobbaan Mootummaa Wayyaanee Salphinaan Xumuramte!